Fahasamihafana eo amin'ny tamba-jotra sy ny fianarana lalina | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny tamba-jotra sy ny fianarana lalina | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Teknolojia / IT / Fandaharana / Fahasamihafana eo amin'ny tamba-jotra sy ny fianarana lalina
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny tamba-jotra sy ny fianarana lalina dia ny tambajotra neural miasa mitovy amin'ny neurons ao amin'ny ati-dohan'ny olombelona mba hanao asa computation isan-karazany haingana kokoa raha ny fianarana lalina kosa dia karazana fianarana milina manokana izay manahaka ny fomba fianarana ampiasain'ny olombelona hahazoana fahalalana.
Ny tambajotra Neural dia manampy amin'ny fananganana modely vinavina hamahana olana sarotra. Etsy ankilany, ny fianarana lalina dia ampahany amin'ny fianarana milina . Manampy amin'ny fampivelarana ny fanekena ny kabary, ny fanekena sary, ny fanodinana ny teny voajanahary, ny rafitra fanolorana, ny bioinformatika ary ny maro hafa. Neural Network dia fomba iray hampiharana ny fianarana lalina.
2. Inona no atao hoe Neural Network
3. Inona no atao hoe Fianarana lalina
4. Fampitahana mifanila - Neural Network vs Deep Learning in Tabular Form
Inona no atao hoe Neural Network?
Ny neurônika biolojika dia aingam-panahy ho an'ny tambajotra neural. Misy neurons an-tapitrisany ao amin'ny ati-dohan'ny olombelona sy ny fizotran'ny fampahalalana isaky ny neurona iray mankany amin'ny iray hafa. Neural Networks dia mampiasa an'ity scenario ity. Mamorona maodely solosaina mitovy amin'ny ati-doha izy ireo. Izy io dia afaka manao asa sarotra amin'ny computational haingana kokoa noho ny rafitra mahazatra.
Sary 01: Tabilaon'ny block Neural Network
Ao amin'ny tamba-jotra neural, ny node dia mifandray. Ny fifandraisana tsirairay dia manana lanja. Rehefa x1, x2, x3,… ary ny lanja mifandraika dia w1, w2, w3,… avy eo ny fidirana net (y) dia,
Aorian'ny fampiharana ny fidirana harato amin'ny lahasa fampidirana dia manome ny vokatra. Ny fiasan'ny fampahavitrihana dia mety ho lahasa mivantana na sigmoid.
Raha tsy mitovy amin'ny vokatra tiana io vokatra io dia ahitsy indray ny lanjany ary mitohy hatrany ity dingana ity mandra-pahazoanao ilay vokatra irina. Ity lanja fanavaozana ity dia mitranga arakaraka ny algorithm backpropagation.
Misy topolojia tambajotra neural roa antsoina hoe feedforward sy feedback. Ireo tambajotra feedforward dia tsy manana loop manome valiny. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny signal dia mikoriana fotsiny avy amin'ny fidirana mankany amin'ny output. Ny tambajotra feedforward dia mizara bebe kokoa amin'ny tambajotra tokana sy tambajotra samihafa.
Ao amin'ny tambajotra sosona tokana, ny sosona fampidirana dia mifandray amin'ny sosona output. Ny tambajotra neural multi-layer dia manana sosona betsaka kokoa eo anelanelan'ny sosona fidirana sy ny sosona famoahana. Ireo sosona ireo dia antsoina hoe sosona miafina. Ny karazana tambajotra hafa dia ireo tambajotram-pifandraisana izay manana làlana maneho hevitra. Ankoatr'izay, misy ny fahafahana mampita vaovao amin'ny andaniny roa.
Sary 02: Tambajotra Neural Multilayer
Ny tambajotra neural dia mianatra amin'ny fanovana ny lanjan'ny fifandraisana misy eo amin'ny teboka. Misy karazany telo ny fianarana, toy ny fianarana arahi-maso, ny fianarana tsy voara-maso ary ny fianarana fanamafisana. Amin'ny fianarana arahi-maso, ny tambajotra dia hanome vector output araka ny vector input. Ity vector output ity dia ampitahaina amin'ny vector output izay tiana. Raha misy tsy fitoviana dia hanova ny lanjany. Mitohy hatrany io fizotran-javatra io mandra-pahatongan'ny tena fivoarana mifanaraka amin'ny vokatra tadiavina.
Ao amin'ny fianarana tsy voara-maso, ny tambajotra dia mamaritra ny lamina sy ny endri-javatra avy amin'ny angon-drakitra fampidirana sy ny fifandraisana amin'ny angon-drakitra fampidirana azy irery. Amin'ity fianarana ity dia miangona ny vektor ampidirina amin'ny karazany mitovy amin'ny famoronana clusters. Rehefa mahazo lamina fampidirana vaovao ny tamba-jotra dia hanome ny fivoahana mamaritra ny kilasy misy an'io lamina fampidirana io. Ny fianarana fanamafisana dia manaiky fanehoan-kevitra sasany avy amin'ny tontolo iainana. Avy eo manova ny lanjany ny tamba-jotra. Ireo no fomba fanazarana tambajotra neural. Amin'ny ankapobeny, ny tambajotra neural dia manampy amin'ny famahana olana isan-karazany amin'ny fanekena ny lamina.
Inona no atao hoe Fianarana lalina?
Alohan'ny hianarana lalina dia ilaina ny miresaka momba ny fianarana milina. Manome ny fahafahan'ny solosaina hianatra tsy misy fandaharana mazava. Raha atao teny hafa, dia manampy amin'ny famoronana algorithma fandinihan-tena handinihana ny angona sy hahafantarana ireo lamina handraisana fanapahan-kevitra. Saingy, misy fetra vitsivitsy ny fianarana milina ankapobeny. Voalohany, sarotra ny miasa miaraka amin'ny angon-drakitra avo lenta na ny setrin'ny fampidirana sy fivoahana tena lehibe. Mety ho sarotra koa ny manaisotra fitrandrahana.
Ny fianarana lalina dia mamaha ireo olana ireo. Izy io dia karazana fianarana milina manokana. Manampy amin'ny fananganana algorithme fianarana izay afaka miasa mitovy amin'ny ati-dohan'olombelona. Ny tambajotran-tsofina lalina sy ny tambajotra neural miverimberina dia maritrano fianarana lalina. Ny tambajotra neural lalina dia tambajotra Neural misy sosona miafina maro. Ireo tambajotra tsy miverimberina dia mampiasa fahatsiarovana mba hikarakarana ny filaharan'ny fidirana.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny tamba-jotra sy ny fianarana lalina?
Ny Neural Network dia rafitra iray izay miasa mitovy amin'ny neurons ao amin'ny ati-dohan'olombelona mba hanao asa fanisana isan-karazany haingana kokoa. Ny fianarana lalina dia karazana fianarana milina manokana izay maka tahaka ny fomba fianarana ampiasain'ny olombelona hahazoana fahalalana. Neural Network dia fomba iray hahazoana fahalalana lalina. Etsy ankilany, ny Deep Leaning dia endrika iray manokana amin'ny Machine Leaning. Io no fahasamihafana lehibe eo amin'ny tamba-jotra sy ny fianarana lalina
Famintinana - Neural Network vs Deep Learning
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny tamba-jotra sy ny fianarana lalina dia ny tamba-jotra neural miasa mitovy amin'ny neurons ao amin'ny ati-dohan'ny olombelona mba hanao asa computation isan-karazany haingana kokoa raha ny fianarana lalina kosa dia karazana fianarana milina manokana izay manahaka ny fomba fianarana ampiasain'ny olombelona hahazoana fahalalana.
1. "Inona ny atao hoe Deep Learning (Deep Neural Network)? - Famaritana avy amin'ny WhatIs.com. ” SearchEnterpriseAI. Hita eto
2. “Fianarana lalina.” Wikipedia, Foundation Foundation, 30 Mey 2018. Hita eto
3.edurekaIN. Inona no atao hoe fianarana lalina | Fianarana lalina natsotra | Fampianarana lalina momba ny fianarana | Edureka, Edureka !, 10 Mey 2017. Hita eto
4.Tutorials Point. “Bara-panorenan'ny tambajotra tsy miankina amin'ny artifisialy.” Tutorials Point , 8 Janoary 2018. Hita eto
1.A network neural artific'Ny Geetika saini - Asa manokana, (CC BY-SA 4.0) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
2.'MultiLayerNeuralNetworkBigger english'By MultiLayerNeuralNetwork_english.png: Asa Chrislbderivative: - HELLKNOWZ ▎TALK ▎enWP TALK (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny Hashtable sy Hashmap Fahasamihafana eo amin'ny Wix sy Shopify Fahasamihafana eo amin'ny Xcode sy Swift Fahasamihafana eo amin'ny scanf sy mahazo Fahasamihafana eo amin'ny fiantsoana amin'ny sandany sy ny antso amin'ny fanovozan-kevitra
10 Jona 2018 amin'ny 5:42 hariva
Mazava ny fanazavana
Fahasamihafana eo amin'ny Waxing sy Sugaring
Fahasamihafana eo amin'ny Mitosis sy ny binary Fission
Fahasamihafana eo amin'ny cafe sy ny trano fisakafoanana
Fahasamihafana eo amin'ny Socket sy Port
Fahasamihafana eo amin'ny Amphiprotic sy Amphoteric